KN95 Mask Vagadziri uye Vanotengesa - China Fekitori - Quanzhou waimaoniu Import uye Export Trade Co, Ltd.
Musha > Zvigadzirwa > Masks > KN95 Mask
KN95 chiChinese masiki akaenzana.KN95 masiki rudzi rwemaski ane chetechuji kusefa kwehunyanzvi muChina.
KN95 chiChinese chinowanzo masiki
MaW9595 masiki rudzi rwemasiki ane hutachiona hwekuchera zvakanaka munyika yedu
Masiki e20095 uye masiki N95 ari iwo akaenzana maererano nehuwandu hwekuchera maitiro.
N95 chiyero cheAmerica
Iyo N95 maski ndeimwe yemapfumbamwe ekudzivirira masks ekudzivirira akasimbiswa neNOSOSH (National Institute for Occupational Safety uye Hutano). N95 haisi zita rakanyatsogadzirwa. Chero bedzi ichinge yasangana neye N95 standard uye yakapasa iyo NIOSH ongororo, inogona kunzi N95 maski, iyo inogona kusefa zvimisikidzo ine aerodynamic diimita ye0,05µm ± 0.020µm uye inokwanisa kushanda kwayo kunodarika 95%.
Hot Tags: KN95 Mask, Vagadziri, Vagadziri, Wholesale, Fekitori, Tenga, China, Yakagadzirwa muChina, Mutengo, Mutengo weChidimbu, Quotation, CE, FDA
KN95 yakatarisana MaskChiremba KN95 yakatarisana neMaskChiremba KN95 MaskYenyika YEMKN95Chiremba KN95Mwana KN95Mwana KN95 MaskChiremba KN95 MaskKN95 yakajairwa mask
Ndapota Inzwai wakasununguka kupa bvunzo yako mune fomu iri pasi apa. Tichakupindura maawa makumi maviri nemaviri.